Imfihlelo emva kweekona ezijikeleziweyo ze-iOS | IPhone iindaba
Uninzi luya kuqaphela ukuba iimilo ezingenanto azikho kwaphela kwiinkqubo ezisebenzayo ze-Apple, phantse naliphi na icandelo elinomxholo othile, lenziwe ngeemilo zejiyometri ezineekona ezijikeleziweyo. Abo kuthi "bafunde" okuninzi ngobomi be-Apple ukusukela oko yaqalwa, ngakumbi malunga ne-eccentric Steve Jobs, bazi kakuhle ukuba eli siko labafana baseCupertino libangelwa yintoni, kodwa ayinguye wonke umntu owaziyo isizathu seli nyathelo, ke Namhlanje kwi-iPhone eyiyo siza kukuxelela imfihlelo engemva kwee-angles ezijikeleziweyo ze-iOS.
Nabani na onokucinga ukuba isizathu seekona ezijikeleziweyo kuyo yonke inkqubo yokusebenza, inokuba sisigqibo somyili oyintloko, oko kukuthi, uJony Ive. Nangona kunjalo, akukho nto iqhubekayo kwinyani, nguSteve Jobs ngokwakhe owayekhathazeke kakhulu ngalo myalelo. Ukuyiqonda sibuyele kwi-Apple Lisa, apho USteve Jobs ubuze iinjineli zakhe, ukuba kwisicelo sokuzoba, unokudala uxande ngeekona ezijikelezileyo, Ayisiyiyo loo nto kuphela, unokwenza izangqa kunye nee-ovali, ezishiye uSteve Jobs echukumisekile. Ukusukela ngoko, ukuthanda kukaSteve Jobs ngomxholo ojikeleziweyo we-angle kulandelwe ukuza kuthi ga kulo mhla, isiko lokuba zonke iinkqubo zakhe zokusebenza ziyaqhubeka nokuzigcina.
USteve-Isangqa zilungile, kwaye ii-ovals zilungile, kodwa uthini ngokuzoba iingxande ezineekona ezijikeleziweyo? Ngaba nathi singayenza?
UAtkinson-Hayi, asinakuyenza loo nto. Kuya kuba nzima kakhulu ukwenza njalo, kwaye andiqondi ukuba siyayidinga nyani.
USteve-Amarangqa aneekona ezijikeleziweyo kuyo yonke indawo, jonga nje eli gumbi. Ukuba ujonga ngaphandle, isekhona enye indawo, akukho ndawo yonke.
Emva kokuyijika, wakhokelela uAtkinson kwisigqibo sokuba kufuneka asebenze kwezo mbombo zijikelezileyo, kwaye wenza njalo. I-anecdote nje encinci esenza ukuba sibone indlela imisebenzi etyekele ngayo eyayinee-angles ezijikeleziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Imfihlelo emva kweekona ezijikeleziweyo ze-iOS
Ukuhamba ngoku okwenyani kukusetyenziswa okugqithileyo kwedatha yeselfowuni. Lawula iintengiso ezivela ... 🙁
Sebastian Blanco sitsho
Sele i-xD, bendihlala ndisiya kuyo yonke iyure, ngoku kuphela xa ndisekhaya kunqabile, ayiqhelekanga. Banyuselwe kwi-publi
Phendula uSebastian Blanco
UMiguel Gaton sitsho
Enkosi kakhulu ngesilumkiso. Yayiliphulo elalifanele ukuvela kuphela kwikhompyuter kwaye lalingena kuthi kwiselfowuni. Sele ithathe umhlala-phantsi.
Uxolo ngokwenzela ingxaki.
I-Apple ikhupha i-beta yokuqala ye-iOS 9.3.3
"Hayi Siri" ayikusebenzeli? Zama ezi zisombululo